Laptọọpụ adịghị agbanyụ kpamkpam (kọmputa)
Ezi ụbọchị. Ọtụtụ mgbe, ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ (na-adịkarịghị PC) na-eche otu nsogbu: mgbe ngwaọrụ agbanyụrụ, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ (yabụ, ma ọ dịghị azaghachi, ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ihuenyo na-aga n'ihu, na laptọọpụ na-arụ ọrụ n'ihu (ị nwere ike ịnụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma hụ A na-agbanye ọkụ na ngwaọrụ ahụ)).
Otu esi agbanye Bluetooth na Windows 10
Ndewo Bluetooth dị oke aka, na-enye gị ohere ịnyefe ozi ngwa ngwa na ngwa ngwa n'etiti ngwaọrụ dị iche iche. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na laptọọpụ ọgbara ọhụrụ (mbadamba) na-akwado ụdị data a na-enyefe data (maka PC nkịtị, enwere nkwụnye nkwụsị, ha anaghị adị iche site na "igwe" mgbe niile). Na obere obere isiokwu a, achọrọ m ịgafe site na ntinye iji tụlee Bluetooth gụnyere "Windows ọhụrụ" ọhụrụ (fangled).
Esi eme ka ndụ batrị nke laptọọpụ dịkwuo elu
Ezi ụbọchị. Oge arụ ọrụ nke ngwaọrụ mkpanaka (gụnyere laptọọpụ) dabere na ihe abụọ: ogo nke batrị (zuru ezu ebubo; ọ bụrụ na ọ nọghị ala) na ọkwa ọkwa nke ngwaọrụ n'oge ọrụ. Ma oburu na ike batrị apughi ibuwanye (ma oburu na i ji ihe ohuru dochie ya), mgbe ahuru ibu nke ngwa di iche na Windows na laptọọpụ niile!
Otu esi jikọọ keyboard ikuku site na Bluetooth gaa na mbadamba, laptọọpụ
Ndewo Echere m na ọ dịghị onye ga-agọnahụ na nchịkọta nke mbadamba nkume etoola ọtụtụ oge na ọtụtụ ndị ọrụ enweghị ike icheta ọrụ ha n'enweghị ihe gadget :). Ma mbadamba (n'echiche nke m) nwere ihe nlọghachi dị ịrịba ama: ọ bụrụ na ịchọrọ dee ihe karịrị ogologo ahịrịokwu abụọ, mgbe ahụ nke a na-aghọ ezigbo nrọ.
Otu esi agbanye Bluetooth na laptọọpụ. Kedu ihe ị ga eme ma ọ bụrụ na Bluetooth anaghị arụ ọrụ?
Otutu laptọọpụ nke oge a na-ejikọta ngwa ntanetị Bluetooth. Nke a na-enye gị ohere ịkekọrịta faịlụ, dịka ọmụmaatụ, na ekwentị mkpanaaka. Ma mgbe ụfọdụ, ọ na-apụta na Bluetooth na laptọọpụ adịghị arụ ọrụ. N'isiokwu a, m ga-achọ ịkọwa isi ihe kpatara nke a, iji mepụta nhọrọ maka ngwọta, ka i wee weghachite arụmọrụ nke laptọọpụ gị ngwa ngwa.
Otu esi jikọọ mbadamba na laptọọpụ ma nyefee faịlụ site na Bluetooth
Ezi ụbọchị. Ijikọta mbadamba na laptọọpụ ma na-ebufe faịlụ sitere na ya dị mfe karịa mgbe ọ bụla, jiri eriri USB mgbe niile. Mana mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na gị enweghị ike ịchọpụta ya (dịka ọmụmaatụ, ị na - eleta ...), ịkwesịrị ịnyefe faịlụ. Ihe ị ga-eme Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ ọ bụla na mbadamba nkwado Bluetooth (ụdị nkwurịta okwu wireless n'etiti ngwaọrụ).
https://termotools.com ig.termotools.com © Bluetooth 2020